Fahamka Macaamiishaada 'Baahiyaha Falanqaynta Saadaasha | Martech Zone
Arbacada, Juun 14, 2017 Douglas Karr
Dad badan oo iibiya iyo xirfadlayaal suuqgeyn ah, waa halgan joogto ah in laga soo saaro aragti kasta oo waxqabad laga heli karo xogta jirta. Qiyaasta burburka xogta soo socota waxay noqon kartaa cabsi gelin iyo gebi ahaanba culeys, iyo isku day ah in laga soo saaro ounce-ka ugu dambeeya ee qiimaha, ama xitaa kaliya fikradaha muhiimka ah, laga helo xogtaas waxay noqon kartaa howl cabsi badan leh.
Waagii hore, xulashooyinku way yaraayeen:
Kireyso aqoonyahanada xogta. Qaabka loo helo falanqeeyayaasha xogta xirfadleyda ah si ay u falanqeeyaan xogta una soo laabtaan jawaabahoodu waxay noqon karaan kuwo qaali ah oo waqti badan qaata, ruugista toddobaadyo ama xitaa bilo, mararka qaarkoodna wali soo celiya natiijooyin shaki leh.
Ku kalsoonow mindhicirkaaga. Taariikhda ayaa muujisay waxtarka natiijooyinkaas inay noqon karaan kuwo shaki badan.
Sug oo arag waxa dhacaya. Habkan falcelinta ah wuxuu uga tagi karaa urur miisaska la tartamida qof kasta oo kale oo qaab isku mid ah qaatay.
Falanqaynta saadaalinta waxay jabisay miyir-beelka wadajirka ah ee iibinta shirkadaha iyo xirfadleyda suuqgeynta, iyaga oo awood u siinaya inay horumariyaan oo si wanaagsan u qaabeeyaan moodellada dhibcaha hoggaaminta ee hagaajinaya waxqabadka ololaha.
Saadaalin Analytics tikniyoolajiyadda ayaa wax ka bedeshay habka ay ganacsatadu u fahmaan, u qiimeeyaan ulana macaamilaan macaamiishooda hadda iyo kuwa mustaqbalka iyagoo adeegsanaya AI iyo barashada mashiinka, waxaana ku socda isbeddel weyn oo ku saabsan sida xirfadleyda iibka iyo suuqgeynta ay u falanqeeyaan ugana soo saarayaan qiimaha xogtooda. Tani waxay horseedday qoris dheeri ah Analytics horumarinta naqshadeynta iyo dejinta qalabka si wax ku ool ah oo qoto dheer uga faa'iideysanaya xogta ku saabsan macaamiisha shirkadda iyo baahidooda.
Saadaalin Analytics wuxuu sii dhisayaa ka faa'iideysiga barashada mashiinka iyo AI, si dhakhso leh loogu soo ururiyo moodooyinka la saadaaliyay. Moodelladani waxay awood u siinayaan dhibcaha hoggaaminta, jiilka cusub ee hoggaanka iyo xogta hoggaanka sare loo qaaday iyadoo la adeegsanayo macaamilka jira iyo macluumaadka rajada iyo saadaalinta sida hoggaamiyeyaashaas ama macaamiishaasi ay u hawlgeli doonaan - dhammaantood ka hor inta aan iibka iyo waxqabadka suuqgeynta xitaa bilaabmin.
Tiknoolajiyadda cusub, oo gundhig u ah xalalka sida Microsoft Dynamics 365 iyo Suuqa iibka CRM, wuxuu bixiyaa awooda lagu qaabeeyo dabeecadaha macaamiisha saacado gudahood iyadoo la adeegsanayo habab saaxiibtinimo oo iswada oo aan u baahnayn aqoonyahanno xog leh. Waxay awood u siineysaa tijaabada fudud ee natiijooyinka badan iyo aqoonta hore ee hogaaminta waxay u badan tahay inay iibsadaan alaabada shirkadda, ku biiriso warside shirkadeed, ama u beddesho macmiil siyaabo kale, iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha aan waligood iibsan doonin, dhib malahan intee in le’eg ayuu heshiiska ku macaan yahay.
Aqoonta habdhaqankan qotada dheer waxay awood u siineysaa suuqleyda in ay wanaajiyaan waayo-aragnimada macaamilka iyaga oo ka faa'iideysanaya awoodda moodooyinka barashada ku saleysan mashiinka, iyo sifooyinka ganacsiga iyo macaamiisha labadaba si loo helo moodello hoggaamineed adag, aragti ah, iyo saadaalin. Heerarka isku-beddelka ayaa u kici kara ugu badnaan 250-350 boqolkiiba, oo unugkiiba amarkiisu wuxuu qiimeeyaa ilaa boqolkiiba 50.
Saadaalin, suuqgeyn firfircoon ayaa ka caawisa meheraddu inay kaliya hanato dheeraad ah macaamiisha laakiin ka fiican macaamiisha.
Falanqeyntan qotada dheer waxay keenaysaa faham weyn oo ku saabsan ganacsiga ama shakhsiyaadka suurtagalnimada inay wax iibsadaan ama ku lug yeeshaan, iyadoo sidoo kale la siinayo suuqleyda helitaanka sirdoonka waxqabadka leh ee ugu dambeyntii saadaaliya dabeecadaha mustaqbalka. Haddii kooxaha iibka iyo suuqgeynta ay ka heli karaan aragti macaamiishooda mustaqbalka iyo dhaqanka mustaqbalka, waxay u badan tahay inay soo bandhigaan adeegyada iyo alaabada iyaga rafcaanka ka qaadan doonta. Taasina waxay ka dhigan tahay iibin wax ku ool ah iyo suuqgeyn, iyo ugu dambeyn macaamiil badan. Chris Matty, agaasimaha guud iyo aasaasaha Versium
Saadaalin Analytics waxay u saamaxdaa kooxaha iibka iyo suuqgeynta inay ka soo saaraan aragtiyo qiimo leh macaamiisha taariikhiga ah iyo xogta CRM si loo dejiyo moodooyinka saadaalinta ah.
Dhaqan ahaan, Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn, dib u dhac socodka shaqada. Iyada oo beddelka ay lacag iyo waqti ku bixinayaan saynisyahannada xogta ama ugaarsiga, falcelinta waa habka ugu halista yar. Saadaalin Analytics isku dayga ah in loo beddelo iibka iyo suuqgeynta CRM iyadoo la yareynayo halista loona oggolaanayo koox suuqgeyn ah inay si firfircoon u socodsiiyaan iibka caqliga leh iyo ololayaasha suuqgeynta.
Dheeraad ah, saadaalin Analytics waxay u saamaxdaa jiilka dhibcaha hogaaminta saadaalinta labadaba rajada suuq geynta B2C iyo B2B ee u suurta galiya kooxaha suuq geynta iyo iibka inay noqdaan laser diirada saaraya xaq u macaamiisha si sax ah waqtiga saxda ah, iyaga oo ku hagaya alaabada saxda ah iyo adeegyada saxda ah. Noocyadan Analytics u oggolow isticmaaleyaasha inay soo saaraan oo ay kordhiyaan liisaska rajada beddelashada sare ee ku saleysan astaamaha macmiilka ee jira ee hay'adda adoo ka faa'iideysanaya dejinta xogta lahaanshaha ama bakhaarka xogta.
Qaar ka mid ah kiisaska isticmaalka ugu badan ee xogta weyn Analytics waxay udub dhexaad u yihiin jawaabta su'aasha, Muxuu macmiilku u badan yahay inuu iibsado? Layaab malahan, tan sifiican ayaa dhulka loogulaabay BI iyo Analytics aaladaha, oo ay soo bandhigaan saynisyahano xog ah oo soosaara algorithms qaas ah oo kusaabsan xogta gudaha, iyo dhawaanahanba, daruuraha suuq geynta ee ay bixiyaan bixiyeyaasha sida Adobe, IBM, Oracle, iyo Salesforce. Sanadkii la soo dhaafay, ciyaaryahan cusub ayaa la soo baxay qalab is-adeegsi ah oo, daboolida, barashada mashiinka mashiinka, oo ay taageerayaan xog lahaansho la dejiyay oo leh in kabadan hal tiriliyan sifooyin. Shirkadda [waa] Versium. Tony Baer, ​​Falanqeeye Maamule at ugxanta
Saadaalin Analytics oo ku saabsan habdhaqanka macaamiisha ayaa ah goob dadku ku badan yahay, ayuu yidhi Baer. Si kastaba ha noqotee, oo ku saleysan ogaanshaha taas data waa boqor, wuxuu bixiyaa in xalalka sida Versium ay yihiin beddelaad qasab ah maxaa yeelay waxay siinayaan marin u helidda bakhaar weyn oo ah macmiilka iyo xogta ganacsiga oo leh madal ay ku jirto barashada mashiinka si ay uga caawiso suuqleyda inay saadaaliyaan dhaqanka macaamiisha.
Ku saabsan Versium
Versium waxay bixisaa saadaalin otomaatig ah Analytics xalalka, kuwaas oo si dhakhso leh, si sax ah iyo qayb yar oo ka mid ah kharashka shaqaalaynta kooxaha sayniska xogta sayniska qaaliga ah ama ururada adeegyada xirfadleyda ah u siiya xog sir ah oo ficil ah.
Xalka Versium wuxuu ka faa'iideystaa bakhaarada ballaaran ee LifeData® ee shirkadda, oo ay ku jiraan in ka badan 1 tiriliyan astaamaha macaamiisha iyo xogta ganacsiga. LifeData® waxaa ku jira xog anshaxeed khadka tooska ah iyo mid khadka tooska ah ka kooban oo ay ku jiraan faahfaahinta bulshada-garaafka, waqtiga dhabta ah xogta dhacdada ku saleysan, danaha iibsiga, macluumaadka dhaqaalaha, waxqabadyada iyo xirfadaha, tirada dadka iyo waxyaabo kale oo badan. Sifooyinkaan waxay la mid yihiin xogta gudaha ee shirkadda, waxaana loo adeegsaday moodooyinka barashada mashiinka si loo wanaajiyo soo iibsiga macaamiisha, haynta iyo iibinta iskutallaabta iyo kor u qaadista howlaha suuqgeynta
Waxbadan Ka Baro Saadaalinta Versium
Tags: maamulka xiriirka macaamiishadhaqdhaqaaqa microsoft 365ugxanfalanqaynta saadaalintaiibiyaha xoogga crmisweydaarsiga